Horudhac: Manchester United vs Tottenham Hotspur… (Jose Mourinho oo caawa dib ugu soo laabanaya markii ugu horreysay garoonkii laga cayriyey ee Old Trafford) – Gool FM
Horudhac: Manchester United vs Tottenham Hotspur… (Jose Mourinho oo caawa dib ugu soo laabanaya markii ugu horreysay garoonkii laga cayriyey ee Old Trafford)
(Manchester) 04 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa caawa soo dhoweynaysa Tottenham Hotspur kaddib markii ay ku guuldarreysteen inay guul gaaraan labadoodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaareen horyaalka Premier League.
Dhinaca kale macallinkoodii hore ee Jose Mourinho kaasoo guul gaaray saddexaddiisii ugu horreysay ee uu maamulay horyaalka naadiga Spurs, taasoo ka caawisay kooxda reer London inay labo dhibcood ka sarreyso Man United kala horreynta horyaalka Premier League.
Taariikhda: Arbaco, 04 Dis 2019
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 10:30 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Laacibka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa sii wadan doona maqnaanshihiisa uu la maqan yahay dhaawaca dhanka canqowga ah kaasoo garoomada seejiyey tan iyo dhammaadkii bishii September.
Scott McTominay oo khadka dhexe u maamula kooxda Man United ayaa ka soo muuqan kara kulankan kaddib saddex kulan oo uu la maqnaa dhibaato la mid ah tan Pogba, halka taam ahaanshaha Nemanja Matic la qiimeyn doono.
Tottenham ayaan heli doonin adeegga Erik Lamela iyo Michel Vorm, kuwaasoo weli la dhibtoonaya dhaawacyo kala duwan oo muruqa iyo kubka ah.
Hugo Lloris iyo Ben Davies ayaa sii joogteyn doona iyaguna maqnaanshahooda mudada dheer.
>- Manchester United ayaa guuldarreysatay saddex ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku so dhoweysay Spurs (4 Guul) oo ay ku jiraan 0-3 xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, iyadoo khasaaro la kulantay labo ka mid ah 36-kii kulan ee ay gurigeeda ku qaabisay Tottenham ciyaaraha sare ee horyaalka markaas ka hore (24 guul iyo 7 barbaro).
>- Tottenham ayaa guuldarro la kulantay horyaalka Premier League iyadoo la ciyaareysa Manchester United in ka badan koox kasta oo kale oo ay tartankan ku wajahday, waxaana laga adkaaday Spurs 34 kulan.
>- Manchester United ayaa qaaday 18 dhibcood oo ay ka heshay 14-kii kulan ee ugu horreeyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan (4 guul, 6 barbaro iyo 4 guuldarro) waa ku bilaabashadoodii xilli ciyaareed ee ugu xumeyd horyaalka tan iyo kal ciyaareedkii 1988-89 markaasoo ay sidaan oo kale 18 dhibcood heleen isla markaana ay ku dhammaysteen kaalinta 11-aad ee horyaalka.
>-Tan iyo markii ay shabaqeeda gool ka ilaashatay saddex kulan oo xiriir ah hroyaalka Premier League bishii Febraayo, Manchester United ayaa kaliya shabaqeeda gool ka ilaashatay labo kulan 25-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartankan, waxaana laga dhaliyey 36 gool.
>- Jose Mourinho ayaa noqon kara macallinkii ugu horreeyey Tottenham oo guuleysta saddexdiisa kulan ee ugu horreeya oo uu kooxda hoggaamiyey kulammada sare ee horyaalka.
>- Xiddiga kooxda Tottenham ee Dele Alli ayaa ku lug yeeshay saddex gool labadiisii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, waxa uu dhaliyey labo gool isagoo dhiibay hal gool oo kale, waana in ka badan intii uu sameeyey 12-kiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu kooxda laylinayey macallin Mauricio Pochettino.
Horudhac: Chelsea vs Aston Villa… (Blues oo doonaysa inay soo gabagabayso saddex kulan oo aysan guul gaarin)
Horudhac: Liverpool vs Everton… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa Merseyside derby ee ka dhacaya Anfield)